झलनाथ खनालको मध्र्यमार्गी बाटो – YesKathmandu.com
एमाले नेता झलनाथ संविधान कार्यन्वयनका लागि प्रमुख दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । एमाले प्रतिपक्षमा बस्न नडराएको प्रष्ट पार्दै उनले, अहिलेको खेलले संविधान कार्यान्वयन नहुने डर बढेको बताए । उनले भने- ‘अविश्वासको प्रस्तावले हामीबीच अविश्वासको खाडल बढाएको छ, जहाजबाट हामफाल्ने मूसा प्रवृत्तिलाई फाइदा भएको छ ।
एमाले नेता खनालले अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक र जरुरी थिएन भन्दै ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने- यो सरकारले भारतसँग न्यानो सम्बन्ध बनायो, चीनसँग गरेका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु विडम्बना हो । यसले हामीलाई अग्रगतितर्फ लाँदैन ।
‘मुसा’ भनेर कस्लाई संकेत गरेका हुन उपेन्द्र यादवले ?
माओवादी केन्द्रले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम( को-को बन्दैछन मन्त्री )
आज काठमाडौंको थुपै स्थानमा सुरक्षा जाँचमा कडाई
देउवा र महराले सरकार ढाल्ने पहिलो योजना दिल्लीमा बनाएको मलाई सुचना छ
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा भारी मतले बिजयी
प्रचण्डसँगै काम गर्न कर्मचारी किन मान्दैनन ?
साढे २८ प्रतिसत नेपाली गरिब, ६ नम्वर प्रदेश गरिबमा पहिलो
गुम्बामा जुवा खाल : लामा भेषधारीसहित २५ पक्राउ
प्रचण्डको यस्तै कार्यशैली रहे पार्टी मात्र होइन मुलुक सकिन्छ !
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद मङ्सिर ८ बाट सुरु हुने